इच्छाराजको ठगीको श्रृखला : सुन्धाराको सिटिसी मल लिलामी गरिदै – TibraKhabar (तीव्रखबर डटकम) छिटो खबरको एउटै विकल्प
इच्छाराजको ठगीको श्रृखला : सुन्धाराको सिटिसी मल लिलामी गरिदै
- November 23, 2021 मा प्रकाशित
काठमाडौं । उच्च पदस्थ कर्मचारी र दलको आँडमा अबैधधन्दा चलाउदै आएका पुर्व संविधान सभाका सभाषद् इच्छाराज तामाङको ठगीधन्दाको श्रृखला नियन्त्रण हुनेभन्दा पनि झन बढ्दै गएको छ । शक्तिकै आँडमा सहकारीको नामबाट सर्वसाधारणको रकमलाई आफुखुशी खर्च गर्दै अर्बौ रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा अहिले थुनामा रहेका तामाङको ठगीको श्रृंखला बाहिरीने क्रम जारीइ रहेको छ । सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभका निक्षेपकर्ताको अर्बौ रुपैयाँलाई संगठित रुपले ठगी गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका घरजग्गा व्यवसायी तामाङ यति बेला एकपछि अर्को समस्याको घेराबन्दीमा परेका छन् ।
सत्ता र शक्तिको आडमा यसअघि उम्किँदै आएका तामाङ दुई महिनादेखि हिरासतमा रहेका छन् । यही समयमा उनले ऋण नतिरेको भनेर कर्मचारी सञ्चय कोषले तामाङको स्वामित्वमा रहेको सुन्धारास्थित सिभिल ट्रेड सेन्टर समेत लिलामीको प्रक्रिया जाने भएको छ । एकातर्फ गैरकानुनी रुपमा शक्तिकेन्द्रकै दवावमा सो मल तामाङले सुन्धारामा बनाएका छन् । मलसंगै अति संबेदनशिल क्षेत्र अर्थात केन्द्रीय कारागार रहेको स्थानमा सो मल बनाउन नै नपाउने विद्यमान ऐनलाई समेत लत्याउदै तामाङले सो मल बनाएका थिए ।
मल बनाएसंगै केन्द्रीय कारागार र मलको ठिक अगाडी नेपाली सेनाको मुख्यालय रहेकाले सो क्षेत्रमा अग्लो भबन निर्माणर् गर्न पाईदैन् । तर तामाङले नेकपा एमालेकै कृयाशिल सदस्य भएको र तत्कालिन संविधान सभाको सभाषद् भएकै अबस्थामा विद्यमान ऐनलाई लत्याउदै सो भबन बनाएका थिए । एकातर्फ ऐन कानुनलाई समेत लत्याउदै आएका तामाङले लिएको ऋण चुक्ता नगरेपछि सञ्चय कोषले ऋण चुक्ता गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।
कोषले सिभिल इन्टेट्स प्रालिले लिएको ऋण रकम ३५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न भन्दै सूचना निकालेसंगै तामाङ घेराबन्दीमा परेका हुन । इच्छाराज तामाङ, केशवलाल श्रेष्ठ र प्रविण मुखियाले सिभिल इन्टेट्स प्रालिका नाममा लिएको ऋणका भाखा नाघेको, ऋणको सावा र ब्याज रकम बुझउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अटेरी गरेको भन्दै सञ्चय कोषले अबको ३५ दिन भित्र ऋण रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक सूचना निकालेको हो । कोषको तिर्न बुझाउन बाँकी रकम, त्यसमा लाग्ने ब्याज र हर्जना ब्याज तथा लाग्ने अन्य रकमसमेत ३५ दिनभित्र चुक्ता वा नियमित भुक्तानी गर्न भनिएको छ ।
३५ दिनभित्र भुक्तानी नगरेको खण्डमा चलअचल सम्पत्ति कोषले कब्जा वा लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कारबाही गरी असुल उपर गर्ने भएको छ । त्यसबाट लिनुपर्ने रकम असुल उपर नभएमा जमानी दिनेको चलअचल सम्पत्तिबाट असुलउपर गरिने कोषले जनाएको छ । सिभिल इन्टेट्सले दीर्घकालीन कर्जा लिँदा काठमाडौं महानगरपालिका-११ सुन्धारास्थित कित्ता नम्बर २४२४ को ६ रोपनी जग्गा र त्यहाँ निर्माण भएको १३२ एकाइ पसल तथा कबलहरु धितोमा राखेको थियो ।
३५ दिनभित्र ऋण नतिरेमा यो सबै सम्पत्ति कोषले लिलामी गर्ने भएको छ । तामाङलाई सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभका निक्षेपकर्तालाई संगठित रुपमा ठगी गरेको आरोपमा हिरासतमा लिएर नेपाल प्रहरीको सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । पक्राउ परेपछि उनी सिभिल बैंकको अध्यक्षबाट समेत हटाई सकिएको छ । सिभिल सहकारीका सञ्चालक तामाङ अहिले ठगी मुद्दालगायत अन्य मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरि रहेको छ । सो मल तामाङको स्वामित्वमा रहेको छ ।
तामाङको ठगी कहाँसम्म ?
इच्छाराज तामाङले सहकारीका बचतकर्तालाई मात्रै नभएर अन्य विभिन्न क्षेत्रमा मानिसलाई पनि ठग्न भ्याएका छन् । अहिले ब्यूरोले बचतकर्ताको उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गरेको छ । ब्यूरोले आफ्नो क्षेत्रभित्र परेका उजुरीमा मात्रै अनुसन्धान गर्ने हो । तर तामाङले बचतकर्ताका साथै निर्माण कम्पनीलाई समेत ठग्न भ्याएका छन् । हाउजिङ निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री सप्लाई गर्ने कम्पनीलाई समेत ठगेका छन् ।
सप्लायर्स कम्पनीबाट निर्माण सामग्री ल्याउने पैसा नदिने गरेर पनि धेरै कम्पनीलाई उनले ठगेका छन् । कतिपय व्यक्तिलाई तामाङले जग्गा दिने भनेर पैसा लिने तर जग्गा पास गरेर नदिने, घर दिने भनेर पैसा लिने तर घर पास गरेर नदिने, लिएको पैसा पनि फिर्ता नगर्ने गरेर पनि ठगेका छन् । तामाङको ठगीको धन्दा यतिमा मात्रै सिमिति छैन । केही ग्राहकलाई जग्गा मिलाई दिन्छु भनेर पैसा लिने, लामो समयसम्म जग्गा नदिएपछि पैसा नै फिर्ता माग्दा पैसा पनि नदिएर ठगी गरेको पीडितहरुको गुनासो रहेको छ ।
तामाङले लामो समयदेखि नियतमा नै खोट राखेर ठग्न थालेको भएपनि विगत ३ वर्षयता निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न छोडेका छन् । उनले पैसा नदिने भएपछि निक्षेपकर्ताले अरु विकल्प नपाएपछि ब्यूरोको सहारा लिन पुगेका छन् । अहिले ब्यूरोले अनुसन्धान करिब अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । अनुसन्धानले के देखाउँछ त्यो भने सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
र यो पनि अध्ययन गर्न छुट्यो की ?
सिभिल होम्सको मालिकको ठगी कार्य जारीः कमिशनकै कारण सरकारी निकाय मौन
सिभिल होम्स्का मालिक तामाङको ठगीधन्धा : घर किन्ने ढुव्दै
सिभिल ग्रुपको ठगीधन्दा : शक्ति र पैसाको भरमा अबैध कारोबार
अकुत सम्पत्ति थुपार्ने चौधरी, श्रेष्ठ, तामाङ, अर्याल, सुमार्गीमाथी अनुसन्धान …(भिडियो सहित)
पूर्वसांसद तथा व्यवसायी इच्छाराज तामाङको सबै बैंक खाता रोक्का